काँग्रेस झापा जिल्ला सभापतिका उम्मेद्वार राम कट्टेल ।
निष्कलंक, इमान्दार र सादगी पार्टीको बिरासत जोगाउने एक मात्र उम्मेदवार राम कट्टेल ।
झापा, मंसिर ८ । नेपाली काँग्रेस नयाँ नेतृत्व चयनको महाअभियानमा जुटेको छ । गाँउ नगर तहबाट क्षेत्र हुँदै जिल्लास्तरमा नेतृत्व चयन हुने काम देशभर भइरहेको छ । लोकतन्त्रको पर्याय नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्व सम्हाल्नका लागि जसरी हजारौं कार्यकर्ताहरु उत्साहित देखिएका छन्, यो पार्टी र लोकतन्त्रकालागि सुन्दर पक्ष हो । पार्टीमा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन जति चुस्त तरिकाले हुनसक्छ, पार्टी त्यति नै गतिशील र जीवन्त बन्छ ।
पार्टीको जिल्ला नेतृत्वको लागि झापामा राम कट्टेल उम्मेदवार बन्नु भएको छ । बिधि,विधान र अनुशासनमा पार्टी चल्नु पर्छ भन्ने समस्त कार्यकर्ताका लागि यो भन्दा खुशीको खवर के हुन सक्छ ? कट्टेलको उम्मेदवारी आफैमा खुशीको सञ्चार गराउने सन्दर्भ हो । बर्तमान उपसभापति भएकाले नाताले सभापतिमा लड्नु स्वभाविकै भए पनि काग्रेस कार्यकर्ताका लागिखुशीको खवर किन छ भने उहाँ जस्तो सादगी, निष्कलंक र इमान्दार नेता झापाको काँग्रेसले पाएको छ । नजिकको तीर्थ हेला भनिन्छ, झापाली कार्यकर्ताले उहाँलाई कसरी मूल्याकंन गर्छन्, त्यो १० गते हुने निर्वाचनले तय गर्ला तर राष्ट्रिय स्तरबाट राम कट्टेलको छविलाई हेर्दा उनी पार्टीले बिरलै पाउने अमूल्य सम्पति हुन् ।
जसले कट्टेललाई हृदयदेखि चिन्छन्, उनीहरु नतमस्तक छन्, जो चिनेर पनि बुझ पचाउँछन्, उनीहरु एक दिन पछुताउने परिस्थिति बन्छ । किनभने गुट परस्त राजनीतिमा राम कट्टेलहरुको कदर हुँदैन । नेपालमा गुटले पार्टी सकिरहेको छ, गुटले सरकार चलाइरहेको छ, गुटमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । गुटले बिधि मान्दैन, गुटले व्यक्ति चिन्दैन । त्यसैले झापामा काँग्रेसको गुटको शिकारमा कट्टेल पर्नु हुँदैन । कट्टेलले बहुत दुख र जतन गरेर राखेको त्यो सादगीपन, त्यो सरलपन र त्यो स्वच्छ छविलाई मलजल गरेर पुनः हुर्काउनु पर्छ । बढाउनु पर्छ । किनभने अहिले काँग्रेस नैतिक मूल्य मान्यतामा पुरै बाँझो छ ।
कट्टेल उम्मेदवार बनेपछि उहाँ झापामा सर्बसम्मत हुनु पर्थ्यो । तर पछि सुनियो काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले उहाँकै कुनै बेलाका सारथी कट्टेललाई समर्थन गर्नु भएन । आफुलाई कुनै स्वार्थ नराखी सहयोग गर्ने कट्टेल जस्ता सादगीलाई सिटौलाले सहयोग किन गर्नु भएन ? किनभने कट्टेल मार्फत उहाको स्वार्थ पुरा हुने थिएन । जति आध्यात्मिक छविको लेप लाए पनि कट्टेलका सन्दर्भमा सिटौलाको अन्तस्करण बिकृत राजनीतिक संस्कारमा गएर टुंगियो । नत्र कट्टेल जस्ता सादगी व्यक्ति सिटौलाको रोजाइमा नपर्नुको कारण के हो ? उत्तर सहज छ, सिटौलाकालागि झापामा काँग्रेसको सभापति बिचौलियासँग उठबस गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्थ्यो, जहाँ कट्टेल फीट थिएनन् ।
अर्का प्रभावशाली नेता केशवकुमार बुढाथोकीले कट्टेललाई समर्थन नगर्नु सामान्य हो । किनभने कट्टेलका प्रतिस्पर्धी भएर आएका देउमान थेवे झापामा उनको उत्तराधिकारी जस्तै हुन् । प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व चयन हुनु स्वभाविक हो तर बुढाथोकीले करीब अस्सी बर्षको उमेरमा आएर सफेद झुट बोलेका छन् । थेवेलाई अघिल्लो पटक नै सभापति बनाउन काँग्रेस प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले समेत हस्ताक्षर गरे भनेर हावा बोल्दा उनको शरीरको भौतिक उचाइ नघटे पनि इमानको उचाई घटेको छ । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुनु पर्छ । चार बर्ष अघि चार जना नेताले गरेको सिण्डिकेट कसरी मान्य हुन्छ ? के थेवेलाई सहमति गरेको कुरा लिखित बुँदामा स्पष्ट छ ? छैन । अभभिावक बन्ने उमेरमा कुमार दाई के स्वार्थमा यति तल्लो स्तरमा पुगे, कार्यकर्ता तीन छक्क परेका छन् ।
यस विषयमा प्रवक्ता बिश्वप्रका शशर्माले लिएको अडान सान्दार्भिक छ । बुडाथोकीले सानो मान्छे भनेर होच्याए पनि लोकतन्त्रको आधारभूत अडानमा शर्माले उचाइलिएका छन् । झापामा क्लिनम्यान कट्टेलको समर्थनमा अहोरात्र मेहनत गरेर शर्माले पार्टी पंक्तिमा शुद्धीकरण चाहेका छन् ।
झापाको निर्वाचनको सन्दर्भमा काँग्रेस कार्यकर्ताले यथास्थितिमै पार्टी रहेको हेर्न चाहने भए जसलाई मत दिए पनि भयो । यथास्थिति भनेकोे पार्टी सन्चालनमा बाहुबलीहरुको बर्चश्व, बिचौलियाको बिगबिगी, इमान्दारहरुको अपमान र किनारा,गुटहरुको जवरजस्त उपस्थितिहुनु हो । पार्टीलाई यस्ता हर्कतबाट जोगाउने उपाए भनेकै महाधिवेशनबाट हो । महाधिवेशन बर्षेनी हुने कार्यक्रम होइन । एक पटक खराव नेतृत्व चयन भए त्यसले छ सात बर्ष पिरोल्छ । त्यसपछि पनि त्यही खराव प्रवृत्ति जरा गाडेर बस्दा अरु सातबर्ष खरावहरुकै हालीमुहाली हुन्छ ।
झापाका काँग्रेस कार्यकर्तासँग समय छैन तर विवेक पनि छ । राम कट्टेलको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेको क्लीनम्यान हुनु हो । उनले यति लामो राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा केही लिएका छैनन् । बरु दिएकै छन् । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला मेची अंचल अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा गरेका काम उनको पछिल्लो देखिने काम हुन् । छोटो समयमा मृगौला रोगीहरुकालागि डाइलासिस सुविधा, आइसियू स्थापना, औसधि बिक्री कक्षको शुरुवातलगायतका काम हुनु उल्लेख उपलब्धि हुन् । यो उदाहरण मात्र हो,कट्टेलले धुलावारी गाविसमा अध्यक्ष हुँदा धेरै अनुकरणीय काम गरेका छन् । धुलावारीमा खानेपानी र क्यापस स्थापनामा उनको बिशेष योगदान छ ।
तीसकै दशकमा बाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका कट्टेल समाजसेवाका लागि गाँउ फर्कनु त्यो बेलाकालागि चानचुने कुरा होइन । राम्रो जागिरको अवसरलाई समेत त्यागेर राजनीतिमार्फत समाजसेवा गर्ने त्यो बेलाको कट्टेलको सोच आजको समयमा पनि सान्र्दाभिक छ । अध्ययन सकेर जोश र जाँगरसहित राजनीतिमा आउने युवाहरुकालागि कट्टेल एउटा मानकबन्न सक्छन् । राजनीतीमा नैतिक मूल्य सबैभन्दामाथि रहन्छ भन्ने मान्यता झापामा स्थापित गराउन कट्टेलले जित्नै पर्छ । व्यक्तिको रुपमा कट्टेललाई यौटा उम्मेदवारको रुपमा मात्र हेरिन सकिएला तर उनी देशभरकै पाटी पंक्तिमा क्लिनम्यान हुन् ।
पार्टीका कैयन गतिविधिबाट वाक्क भएको भए पनि काँग्रेसी कार्यकर्ताहरु आज किसुनजीको आश्रम ललितपुरको बाँडेगाँउ पुगेपछि रिफ्रेस हुन्छ । किसुनजीले पढेका कृति देखेर नोस्टालजिक हुन्छन् र फर्कन्छन् । अमिताकपालीलाई तथा नाम भनेकोमा आत्मआलोचना गर्छन् र श्रद्धा प्रकट गर्छन् । सुन्दरीजल पुग्नेहरु बीपीले प्रयोग गर्ने सामानहरु देखेर मुग्ध हुन्छन् र सपनामा पनि वीपी नै देख्छन् । चाक्सीबारी पुग्नेहरु गणेशमान सिंहको आत्मसम्मान र आँटलाई सलाम गर्छन । कोइराला निवास पुग्नेहरु कोइराला निवासको माटोको सुगन्ध लिन्छन् ।भन्नुको मतलव काँग्रेसको विरासत कमजोर छैन । मात्र खरावहरुको पन्जाबाट पार्टीलाई मुक्त गराउने चुनौति छ । अझै पनि फुटपाथमा लुगा किन्ने समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी काँग्रेसका बाँचेका गहना हुन् । घरमा आउने पाहुनालाई आफै चियाखुवाउने मन्त्री नारायण खड्का त्यही बिरासतबाट निस्किएका उत्तराधिकारी हुन् । केन्द्रमा भएकाले उहाँहरुको बारे सबैलाई थाह हुन्छ तर,काँग्रेस जोगाउँदा जोगाउँदै आफै हराएका धेरै व्यक्तिहरु काँग्रेसमा छन् । गाँउगाँउमा छन् ।
यस्तै,काँग्रेस जोगाउँदा जोगाउँदै आफू हराएका धेरै पात्र मध्येका एक हुन् राम कट्टेल । झापाका प्रथम सहिद बिश्वनाथ घिमिरेको सम्मानमा प्रतिष्ठान संस्थापना गरी सालिक निर्माणमा जुटिरहेका झापाली काँग्रेसका क्लीनम्यान राम कट्टेललाई काँग्रेसको जिल्ला सभापतिमा जिताउनु काँग्रेस कार्यकताको दायित्वभित्र पर्छ र पर्नु पर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ८, २०७८, ११:११:००